Orire oriọna nke na-acha ọcha lamphade - (UL) - Dafne Italian Design
Home shop ọkụ uprights Oriọna na-acha ọcha - (UL)
Home / shop / ọkụ / uprights / Igwe oriọna nwere ndo ọcha - (UL)
Ọkụ oriọna nke nwere ndo ọcha - (UL) buru ibu
okporoko: 806881883974 Category: uprights Product ID: 21532
Oriọna na-acha ọcha na oriọna na-acha ọcha na mkpanaka na-acha uhie uhie. Dakọtara na bọlbụ klaasị; A, A +, A ++
Holddị njigide Lampị E27
Onu ogugu n.1
Buldị bọlbụ Draâ / G95
nche: Dị Mkpa: a rụrụ na ngwa ọrụ agbanyụrụ. Ọzọkwa, arụmọrụ ọ bụla ọkachamara ga-arụrịrị ọrụ niile. N'ikpeazụ, ngbanwe ma ọ bụ ịsụlata aka nwere ike ịme ngwaọrụ ahụ ihe egwu. Companylọ ọrụ ahụ na-ajụ ọrụ niile maka mmebi nke ngwaahịa ya mebere n'ụzọ adịghị eso ntuziaka ndị a.
3 ọkụ chandelier - (UL)
Oriọna oriọna ya na oriọna lampshade - Kwadoro na klaasị klas; A, A +, A ++ - (UL)
White floor lamp - Kwadoro na klas bọlbụ; A, A +, A ++ - (UL)
Iri oriọna na eriri ọcha - (UL)
Lampshade dị ka balloon - Nkeji cm. 40 x 40 x 140h - (UL)
Oriọna oriọna na-enweghị bulbs cm. 50 x 25 x 155h - agba ọla - ígwè - dakọtara na bọlbụ ọkụ klaasị; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
Iri oriọna na kristal na lampshades - (UL)
oriọna ụlọ na ọkụ 4 kristal - cm. 50 x 30 x 158h - dakọtara na bọmbụ ọkụ nkenke; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
Okpokoro oriọna - Square lampshades - (DFL)
Black floor lamp - Kwadoro na klas bọlbụ; A, A +, A ++ - (UL)
okpokoro ala na kristal - cm. 40 x 40 x 170h - dakọtara na bọmbụ ọkụ nkenke; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
2 ala oriọna ọkụ na-enweghị bulbs cm. 40 x 40 x 175h - ya na kristal - kwekọrọ na bọmbụ klas; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
Ejikere ntọala - agba ọcha - jikọtara ya na bọlbụ klas; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)